FIKORONTANAN’NY FIARAHAMONINA : « Tsy atokisan’ny vahoaka intsony ity fitondrana ity »
Namosaka ny heviny indray manoloana ireny savorovoro misy enivon’ny fiarahamonina, indrindra fa ireny niseho teto an-drenivohitra ireny ny mpahay lalàna, ny Maîtra Willy Razafinjatovo. 14 novembre 2017
Raha tsiahivina dia nitrangana korontana tamin’ireo sekoly maro teto Antananarivo sy ny manodidina ny faraparan’ny herinandro lasa teo manoloana ny fiparitahan’ny tsaho tamin’ny fisiana andian’olona mandeha 4x4 izay voalaza fa manindrona ny ankizy mpianatra any an-tsekoly. Tsy izany anefa fa nitondrany fanehoan-kevitra ihany koa ny trangana tsy fandriam-pahalemana izay tsy mety voafehin’ny fanjakana hatramin’izao.
Manoloana ny trangan-javatra misy ankehitriny, indrindra fa ireo mipaka mivantana amin’ny fiainana andavanandron’ny vahoaka dia nilaza ity mpahay lalàna ity fa tsy ananan’ny vahoaka fitokisana intsony ity fanjakana ity.
Nambarany fa namitaka vahoaka ny fitondrana ary mbola mitohy mamitaka hatrany, nomeny ohatra mivaingana tamin’izany moa ny fampanantenana izay nataon’ny praiminisitra lehiben’ny governemanta amin’ny hanafoanana ny tsy fandriam-pahalemana kanefa hatramin’izao mbola tsy takona afenina ny fanjakan’ireo mpanao ratsy manerana an’i Madagasikara.
“Tokony ho fantatry ny mpitondra amin’izao fa tsy misy matoky anareo intsony, be loatra ny lainga natao ary betsaka loatra ny fampanantenana natao kanefa tsy misy tanteraka”, hoy ny fanehoan-kevitra noentin’ny Maître Willy Razafinjatovo. Eo anetrahan’ilay fampanantenana nataon’ny praiminisitra tamin’ny hanafoanana ny trangana tsy fandriam-pahalemana ao anatin’ny telo volana monja dia nilaza hatrany ity farany fa tsy hita akory izay vokatr’izany hatreto fa toa vao mainka aza miaina ao anaty tsy filaminana andro aman’alina ny vahoaka.
“Amin’ilay fampanantenana nomen’ny praiminisitra hoe telo volana no homeko anareo dia hilamina ny tany sy ny fanjakana. Hatramin’izao, moa ve misy olona afaka mitsangana amin’ny fo sy saina tsy miangatra, amin’ny maso tena mihiratra sy fisainana madio dia madio hiteny hoe tena milamina tokoa isika amin’izao. Saika isan’andro na amin’ny fahitalavitra na amin’ny gazety dia faty olona, fanafihana atsy sy aroa dia izany ve no atao hoe milamina ? Dia mbola lazaina ihany hoe matokisa ianareo. Ny fitsaram-bahoaka dia anisany mampiseho ny tsy fahatokisana ny mpitondra amin’izao fotoana izao”, hoy hatrany ny fanehoan-kevitra noentiny.
Tovolahy mpangarom-paosy tokony ho 28 taona saika matin’ny fitsaram-bahoaka AMBODIMITA (3571) 18 février 2021 Ho fantatra tsy ho ela ny anaran’ireo olona ambony voarohirohy FANODINKODINANA VOLAM-PANJAKANA (340) 18 février 2021 Nitafy fahafaham-baraka tanteraka ireo Mpanohitra HETSIKA FANAKORONTANANA (209) 22 février 2021 Miantso ny vahoaka tsy hanaiky horebireben’ny mpanakorontana ny FMIEM HETSIKY NY MPANOHITRA (109) 18 février 2021 Nokaramaina ireo olona nanakan-dalana tamin’ny vato JENERALY RAVALOMANANA RICHARD (99) 22 février 2021 Mpanafika taksimoto iray maty voatifitra, valo azo sambo-belona ANDILAMENA (80) 18 février 2021